Qarax ka dhacay wadanka Congo oo laba ay ku dhinteen – The Voice of Northeastern Kenya
Qarax ka dhacay wadanka Congo oo laba ay ku dhinteen
Qarax ka dhacay wadanka dimuqraadiga ah ee Congo gaar ahaa gobolka bari ee kivu ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen laba qof halka 32 qof oo kale oo ahaa ciidamo nabad ilaalin ah ay ku dhawacmeen.
Ciidamadan oo ah kuwa hoostaga qarama midoobay oo kasocdo bartamaha qaarada Africa ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay goob ciidamada India ay tababar ku bixinayeen o kutaalo meel ka yar baxsan Magalada Goma oo dhacda xuduuda Congo ay la wadagto Rwanda.
Saraakil katirsan ciidamada ayaa sheegay in mid kamid ah dadka dhintay uu yahay askari katirsan ciidamada nabad ilaalinta halka qofk kalana uu yahay cunug yar oo 12 sano jir ah, waxaana dhanka kale dadka dhaawacmay loola cararay isbitaalka militiriga ee qaramada Midoobay.
Waxaa hadda bilawday baaritaano qoto dheer oo lagu ogaanayo in qaraxa uu ahaa mid la dhigay goobtaas iyo in uu ahaa mid ay lahaayen ciidamada nabad ilaalinta ah.
Ciidamada joogo Congo oo loogu maagcdaray MONUSCO ayaa kor u dhaafayaa 20,000 oo askari kuwaas oo la doonayo In ay dajiyaan xiisada wadanka dimuqraadiga ka taagan.
← Maxay Kenya kabaran kartaa doorashada maanta ka bilaabatay wadanka Mareykanka
War bixin ku saabsan xisaabaadka wasaaradda caafimaadka oo la filayo in ay soo baxdo →